Magacyada Lix Ciyaartoy Oo Kooxda Koowaad Ee Manchester United Usoo Dallici Doona Xili Ciyaareedka Dambe Oo La Shaaciyey - Gool24.Net
Magacyada Lix Ciyaartoy Oo Kooxda Koowaad Ee Manchester United Usoo Dallici Doona Xili Ciyaareedka Dambe Oo La Shaaciyey
Ole Gunnar Solskjaer ayaa xili ciyaareedka soo socda kooxdiisa koowaad kusoo dhoweyn doona lix ciyaartoy oo da’yar ah oo kasoo dallacaya heerka hoose, kuwaas oo ka doonaya inuu fursad ka siiyo kulamada kooxdiisa.
Manchester United ayey kulliyadeeda ku jiraan ciyaartooyo da’yar oo xirfad badan, kuwaas oo dadka qaarkood ku tilmaamaan inay garoomada wacdaro uga dhigi doonaan sida jiilkii dahabiga ahaa ee ‘Class of 92’ ee guulaha Red Devils soo bilaabay.
Solskjaer ayaa ka war-qaba in kooxdiisa ay kusoo biiri doonaan lix ciyaartoy oo xili ciyaareedkan oo dhan sugayay inta laga soo gabogabaynayo horyaalka, kuwaas oo filanaya in si la mid ah Mason Groonwood iyo Brandon Williams ay waqtiyo kooban u helaan inta hore, kaddibna ay boosas joogto ah helaan iyagoo beddelaya ciyaartoyda hadda sii weynaanaya ee Old Trafford ku sugan.
Ciyaartoydan ayaa kala ah:
Teden Mengi: Waa 18 jir kooxdiisa da’yarta la gaadhay finalka FA Youth Cup, kana ciyaara difaaca oo beddel u noqon karaya Harry Maguire.
Di’shon Bernard: Sida Mengi oo kale ayuu difaac ka ciyaaraa, waxaanay Red Devils da’yarteeda isku garab taagnaayeen kooxda da’yarta, waxaana uu sannadkii hore saxeexay heshiis cusub oo Old Trafford kusii hayn doonaa illaa sannadk 2022.
Difaacan da’da yar ayuu dhererkiisu yahay 6ft iyo 4in, waxaana fursad lasiiyey oo uu kasoo muuqday ciyaartii Europa League ee ay kooxdiisu la dheeshay Astana bilowgii xili ciyaareedka.
Dylan Levitt: Waxa uu dhowaan u dabbaal-degay dhalashadiisa 19aad, waxaanu qayb ka ahaa ciyaartoyda Red Devils ee kulankii Europa League ee Aston Villa.
Laacibkan khadka dhexe oo u dhashay Wales, waxa uu dadka indho sarcaad uga dhigaa sida quruxda badan ee uu kubbadaha u dhiibo, iyadoo 104 baas oo uu bixiyey uu si layaab leh u dhamaystiray 100 ka mid ah, kuwaas oo waliba 67 ka mid ah uu siiyey ciyaartoyda weerarka, taas oo ka dhigaysa laacib kubadda hore u wada.
Ethan Galbraith: 19 jirkan waxa uu marar badan tababarka la qaatay kooxda koowaad ee Manchester United inta uu joogay Solskjaer, iyadoo xulka qarnakiisa Northern Ireland uu sannadkii hore u saftay ciyaar ay la lahaayeen Luxembourg.
D’mani Mellor: Weeraryahan ay dadka qaarkood ku tilmaamaan inuu yahay Mason Greenwood oo magac kale sita. Horyaalka Premier League 2, waxa uu ka dhaliyey afar gool iyo afar caawimood oo uu ku daray kaliya 11 ciyaarood oo uu saftay.
Ethan Laird: Dhamaadka bishii June, Solskjaer ayaa difaacan 18 jirka ah ee hibada ciyaareed leh kusoo daray kooxda koowaad, waxaanu u carbinayaa inuu beddel u noqdo Aaron Wan-Bissaka.
James Garner: Waa 19 jir Man United soo joogay illaa markii ay da’diisu ahayd 8 jirka, waxaana la filayaa inuu ka mid noqdo ciyaartoyda cadaadiska ku saari doona Solskjaer xili ciyaareedka soo socda inay boosas helaan.
Xili ciyaareedkii hore, waxa uu Manchester United u saftay kulan ay ka hor tageen Crystal Palace, laakiin nasiib-darro waxa soo gaadhay dhaawac sabab u noqday inuu muddo maqnaado, kaddibna waayo fursaddii usoo baxday.
Solskjaer oo mar ka hadlay ayaa ku tilmaamay in Garner uu yahay Michael Carrick oo 20 jir ah, taas oo muujinaysa sida uu ugu qanacsan yahay.